Messi Oo Si Qiiro Leh Ugu Jawaabay Dadka Eedeeya
HomeWararka MaantaMessi Oo Si Qiiro Leh Ugu Jawaabay Dadka Eedeeya
Cambaarayn badan ayaa loogu jeediyaa qaabka uu ugu ciyaaro wadankiisa Argentine, kadib marka laga waayo kaalintiisa hoggaamineed ama uu soo bandhigi waayo qaab-ciyaareed la mid ah ka uu Barcelona ku muujiyo oo kale.
Waxa ay dadka dhalleeceeyaa ku eedeeyaan in uu hagrado wadankiisa, maadaama aanu u halgamin wakhtiyada ay u baahan yihiin.
Lionel Messi hadda waxa uu isku diyarinayaa in uu koobka adduunka isku muujiyo, ka horse waxa uu jawaab qiiro leh siiyey kuwa eedeeya, waxaanu yidhi “Waan arkay dhamaan faallooyinka sheegaya in aanan jeclayn inaan u ciyaaro wadankayga, in aanan qaadin heesta qaranka iyo in aanan wax dareen ah u haynin funaanadda Argentina. Waxyeelo ayay iigeysatay inay ka timaado wadankayga iyo inay qaar badani si aan caddaalad ahayn ii weeraraan.
“Argentina waa wadankaygii, waa qoyskaygii, waa halkii aan sheeganayay, waxaan beddali doonaa rikoodhadayda si aan dadka dalkayga farxad ugu sameeyo”. Ayuu yidhi.
Messi waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay wadanka uu ka soo jeedo ee Argentine, isla markaana aanu jirin wadan uu ka doortaa. Waxa uu isbarbar dhigay haddii uu u dhalan lahaa Spain iyo hadda oo uu yahay Argentine.
“Waxaa jiray xidhiidhyo aan toos ahayn oo la doonayay in la eego inaan doonayo inaan Spain u ciyaaro iyo in kale, laakiin markasta waxaan ku jawaabayay inaan doonayo inaan u ciyaaro wadankayga waayo waan jecelahay Argentine waxaanan dareen u hayaa midabkan oo kaliya.
“Markasta waxaa la iga helayaa meesha ay kooxdu iiga baahan tahay, waxaan doonayaa inaan wakhtiyadii xumaa dhinac iskaga dhigo, waanan ku faraxsanahay inay kooxdu ii ogolaatay inaan noolaado”.
Messi waxa uu wadankiisa u ciyaaray markii ugu horreysay sannadkii 2006, intaa wixii ka dambeeyeyna wuxuu ahaa rigli ka mid ah ragga ay kooxdu ka filato guulaha. Waxa uu u saftay 83 kulan, laakiin wax muuqda umuu qaban xulkiisa, ugumana hagar bixin sida Barcelona uu ugu dagaalamo oo kale.
WAR DEGDEG AH: Hazard Oo Heshiis La Galay Gladbach, kana tegaya Chelsea
Tevez Iyo Morata Oo Juventus Ka Badbaadiyey Borussia Dortmund